Mabasa 21 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
21 Zvino patakanga taparadzana navo, tava mugungwa, takafamba takarurama, tikasvika kuKosi, asi zuva rakatevera racho takasvika kuRodzi, uye tichibva ipapo takasvika kuPatara. 2 Patakanga tawana chikepe chaiyambukira kuFenikiya, takakwira chikepe chacho tikaenda. 3 Pashure pokunge taona chitsuwa cheKupro+ takachipfuura chiri kurutivi rwokuruboshwe, tikafamba nechikepe takananga kuSiriya,+ tikamira muTire, nokuti chikepe chaifanira kututunura zvachakanga chakatakura+ ipapo. 4 Takazowana vadzidzi taita zvokuvatsvaka uye takagara pano kwemazuva manomwe. Asi vatungamirirwa nomudzimu+ vakaudza Pauro kazhinji kuti arege kumbotsika zvake muJerusarema. 5 Naizvozvo patakanga tapedza mazuva acho, takabva, tikatanga rwendo rwedu; asi ivo vose, pamwe chete nevakadzi nevana, vakatiperekedza kusvika kunze kweguta. Uye tichipfugama+ pamhenderekedzo, takanyengetera, 6 tikaonekana+ navo, uye isu takakwira muchikepe asi ivo vakadzokera kudzimba dzavo. 7 Takabva tapedza rwendo rwokubva kuTire, tikasvika kuToremai, tikakwazisa hama, tikagara nadzo zuva rimwe chete. 8 Zuva rakatevera racho takabva, tikasvika kuKesariya,+ tikapinda mumba maFiripi muevhangeri, akanga ari mumwe wevarume vaya vanomwe,+ tikagara naye. 9 Murume uyu aiva nevanasikana vana, mhandara, dzaiprofita.+ 10 Asi zvatakagara mazuva mazhinji, mumwe muprofita ainzi Agabhasi+ akaburuka achibva kuJudhiya, 11 akauya kwatiri, akatora bhandi raPauro, akazvisunga makumbo nemaoko, akati: “Izvi ndizvo zvinotaura mudzimu mutsvene, ‘VaJudha vachasunga+ muridzi webhandi iri seizvi muJerusarema vomuisa+ mumaoko evanhu vemamwe marudzi.’” 12 Zvino patakanzwa izvi, isu nevaya vepanzvimbo iyoyo takatanga kumuteterera kuti arege kukwira+ kuJerusarema. 13 Pauro akabva apindura kuti: “Muri kuitei muchisvimha misodzi+ uye muchindishayisa simba mumwoyo?+ Ivai nechokwadi chokuti handina kungogadzirira kusungwa, asi kutofirawo+ zita raShe Jesu kuJerusarema.” 14 Patakatadza kumudzivisa, takabvuma nemashoko okuti: “Kuda+ kwaJehovha ngakuitike.” 15 Zvino pashure pemazuva iwaya takagadzirira rwendo rwacho, tikatanga kukwira kuJerusarema.+ 16 Asi vamwe vevadzidzi vaibva kuKesariya+ vakaendawo nesu, kuti vatisvitse pamba pomumwe munhu aizogara nesu, Minasoni wokuKupro, mumwe wevadzidzi vepakutanga. 17 Patakasvika muJerusarema,+ hama dzakatigamuchira nomufaro.+ 18 Asi pazuva rakatevera Pauro akaenda nesu kuna Jakobho;+ uye varume vakuru vose vakanga varipo. 19 Akavakwazisa, akatanga kurondedzera zvinhu zvose+ zvakaitwa naMwari pakati pemamwe marudzi noushumiri hwake.+ 20 Pashure pokunge vanzwa izvi vakatanga kukudza Mwari, vakati kwaari: “Unoona, hama, kuti zviuru zvevatendi zviri pakati pevaJudha zvingani; uye vose vanoshingairira Mutemo.+ 21 Asi vakanzwa runyerekupe pamusoro pako kuti wanga uchidzidzisa vaJudha vose vari pakati pemamwe marudzi kuti varambe Mosesi,+ uchivaudza kuti varege kudzingisa+ vana vavo kana kufamba mutsika dzavo dzakarongwa. 22 Saka, zvoitwa sei? Kunyange zvakadaro vachangonzwa kuti wasvika. 23 Naizvozvo ita izvi zvatinokuudza: Tine varume vana vakaita mhiko. 24 Enda nevarume ava,+ uzvichenese sezvinodiwa netsika uinavo, uripe,+ kuti misoro yavo iveurwe.+ Naizvozvo vanhu vose vachaziva kuti hapana chiripo pamusoro porunyerekupe rwavakaudzwa nezvako, asi kuti uri kufamba zvakanaka, iwe uchichengetawo Mutemo.+ 25 Kana vari vatendi vanobva pakati pemamwe marudzi, takatumira shoko, tichivaudza zvatakasarudza kuti vanofanira kuzvidzora pane zvakabayirwa zvidhori,+ neropa,+ nezvakadzipwa,+ noufeve.”+ 26 Pauro akabva aenda nevarume vacho zuva rakatevera, akazvichenesa ainavo sezvaidiwa netsika,+ akapinda mutemberi, kuti anozivisa mazuva aifanira kupedzwa+ nokuda kwokucheneswa sezvinodiwa netsika, kusvikira chinopiwa+ chacho chapiwa nokuda kwomumwe nomumwe wavo.+ 27 Zvino mazuva manomwe+ paakanga ava kuda kupera, vaJudha vokuEzhiya pavakamuona mutemberi vakatanga kunyonganisa boka rose revanhu,+ uye vakamubata, 28 vachishevedzera kuti: “Vanhu vaIsraeri, tibatsireiwo! Uyu ndiye munhu anodzidzisa vanhu vose kwose kwose zvinopesana nevanhu+ noMutemo nenzvimbo ino, uyezve, atouya mutemberi nevaGiriki uye asvibisa nzvimbo ino tsvene.”+ 29 Nokuti vakanga vamboona Trofimo+ wokuEfeso ainaye muguta, asi vakanga vachifunga kuti Pauro akanga auya naye mutemberi. 30 Guta rose rakaita mheremhere,+ vanhu vakamhanya pamwe chete; uye vakabata Pauro, vakamuzvuzvurudzira kunze kwetemberi.+ Uye masuo akabva avharwa. 31 Pavakanga vachida kumuuraya, mashoko akasvika kumutungamiriri weboka revarwi kuti Jerusarema rose rakanga ranyongana;+ 32 uye iye akabva atora varwi nevakuru veuto, akamhanyira kwavaiva.+ Pavakaona mutungamiriri wehondo+ nevarwi, vakarega kurova Pauro. 33 Mutungamiriri wehondo akabva asvika pedyo, akamubata, akarayira kuti asungwe necheni mbiri;+ uye akatanga kubvunza kuti aiva ani uye kuti akanga aitei. 34 Asi vamwe vaiva muboka revanhu vakatanga kushevedzera ichi, vamwe vachishevedzera icho.+ Naizvozvo, asingakwanisi kuziva chero chinhu chipi zvacho chechokwadi nokuda kwemheremhere yacho, akarayira kuti aunzwe kudzimba dzevarwi.+ 35 Asi paakasvika pamatanho, zvinhu zvakanga zvaipa zvokuti akanga ototakurwa nevarwi nokuda kwechisimba chaiitwa neboka revanhu; 36 nokuti vanhu vazhinji vakaramba vachitevera, vachishevedzera kuti: “Mubvisei!”+ 37 Zvino zvaakanga ava kuda kupinzwa mudzimba dzevarwi, Pauro akati kumutungamiriri wehondo: “Ndinobvumirwa here kutaura chimwe chinhu kwamuri?” Iye akati: “Unogona kutaura chiGiriki here? 38 Chokwadi hausi iwe muIjipiti akamutsa kumukira+ mazuva aya apfuura, akatungamirira varume vane zviuru zvina vakanga vaine mapanga kuenda kurenje here?” 39 Pauro akabva ati: “Chokwadi, ini ndiri muJudha,+ wokuTaso+ iri muKirikiya, handisi mugari weguta risinganyatsozivikanwi. Naizvozvo ndinokukumbirai, ndibvumirei kuti nditaure nevanhu ava.” 40 Pashure pokunge amubvumira, Pauro, akamira pamatanho, akaninira+ vanhu noruoko rwake. Kunyarara kukuru pakwakavapo, akataura navo nomutauro wechiHebheru,+ achiti: